MacBook ga-agafe 15 nde na 2017 | Esi m mac
N'agbanyeghị olu ndị na-agwa anyị mgbe niile na anyị mikpuru na mgbanwe na oge post-pc (gụnyere Apple n'onwe ya, nke na-ekwupụta ya ugbu a n'ọnụ Steve Jobs na mwepụta nke iPad mbụ), n'agbanyeghị nkatọ a natara Banyere mmelite nke ọtụtụ laptọọpụ "Pro" nke apụl, ọ dị ka afọ 2017 ọ ga-abụ nnukwu afọ na ahịa nke kọmputa MacBook.
Ndị ọkachamara na-ahụ maka ịnye ọkụ na-ebu amụma na ahịa nke Apple's MacBook na MacBook Pro ga-agafe nde 15 na 2017 dum. Ọnụ ọgụgụ ndị a dị mma ga-abụ n'ihi isi ihe abụọ: ezigbo ahịa ndị MacBook Pros nwetarala n'oge ikpeazụ nke 2016, na mmụba nke ndị na-arụ ọrụ Kaby Lake ọhụrụ ga-enye, ma eleghị anya, mmụba ahụ na 32 GB nke Ram nchekwa n'oge ikpeazụ nkeji iri na ise nke afọ a.
1 The MacBook na MacBook Pro ga-adị ndụ ha oké oge nke afọ a
1.1 Ahịa ga-eto site na 10%
1.2 Ndị na-arụ ọrụ Kaby Lake na 32 GB nke RAM, isi ihe na-akpali akpali
The MacBook na MacBook Pro ga-adị ndụ ha oké oge nke afọ a
E nwere ole na ole olu na oru na ịkatọ ọhụrụ update nke Apple si MacBook Pro. Mana ọbụlagodi maka anyị bụ ndị na-agagharị iji dochie MacBook na iPad, eziokwu bụ na anyị enweghị ike iru mmelite a dịka ihe ọ bụla ọzọ karịa ihe ịga nke ọma.
Apple "na-ekwusi ike" na na-na-anya n'etiti kọmputa na mbadamba, ọ dịghị ngwakọ akụrụngwa ndị nwere otu sistemụ arụmọrụ dị ka ụlọ ọrụ ndị ọzọ na-eme, mana n'otu oge ahụ ọ webatara ụzọ ọhụrụ eji emekọrịta na ihuenyo na-enweghị imetụ ya akaka. Ọ bụ Touch Bar na, yana akara mkpisiaka, ọbịbịa nke Siri na macOS Sierra, ndị nhazi ọhụrụ, ma ọ bụ ihe ọhụrụ zuru oke, mara mma karị, dị nro na ọkụ (dabere na atụmatụ nke 12-inch MacBook). , Agbanwewo kpamkpam na nke a ọzọ PROfesional obibia laptọọpụ.
O yikarịrị ka m ga-anwa ikwu, na-echekwa ebe niile, na ọ bụ usoro dị n'etiti ndị otu ngwakọ na otu aka, yana MacBook na iPad na aka nke ọzọ. N'ọnọdụ ọ bụla, ọnụ ọgụgụ ahụ yiri ka ọ na-egosi nke ahụ Apple na-enweta atụmatụ a nke ọma, na ihe ọhụrụ ndị ọ na-ewebata na laptọọpụ kemgbe mmalite nke 12 ″ MacBook na mmiri 2015, mana ọkachasị kemgbe mmalite nke MacBook Pro ọhụrụ a, na-aga ịkọ akụkọ banyere nnukwu ọganiihu na ahịa yana, n'ezie, na-aga nke ọma uru.
Ahịa ga-eto site na 10%
Dị ka akwụkwọ ndị China si kwuo Econom Daily News, Ahịa ahịa ma ọ bụ ngụkọta ọnụ nke kọmputa MacBook na MacBook Pro ga-eto site na 10 pasent na 2017.
N'otu oge ahụ, ọ na-buru amụma na na 13 ″ MacBook Pro nlereanya na-enweghị Touch Ogwe ga-enweta a price Mbelata ga-ekwe ka ọ na-adịgide adịgide dochie 13 ″ MacBook Ikuku, ụdị kachasị ọhụrụ na akara a mgbe furu efu nke otu 11,6-inch.
Ndị na-arụ ọrụ Kaby Lake na 32 GB nke RAM, isi ihe na-akpali akpali
Atụmatụ ndị a dabere na amụma nke onye nyocha KGI Securities Ming-Chi Kuo onye Mọnde gara aga ọ buru amụma que New Kaby Lake processors maka 13 na 15 nke anụ ọhịa MacBook Pros ga-amalite imepụta oke na QXNUMX, nke ga - eme ka ha dị njikere maka mmelite ọhụrụ na nkeji iri na ise nke afọ.
Ihe oru ohuru ohuru Kaby Lake nke gha dochie igwe Skylake na 2016 MacBook Pros Ha anaghị adị ngwa ngwa, mana ha na-eri obere ike ka ha wee rụọ ọrụ ka mma.
Tinyere ya, Kuo bukwara amụma na Mgbatị ebe nchekwa RAM ruo 32 GBỌ bụ ezie na nke a ga-achọ ụdị ebe nchekwa dị iche karịa LPDDR3 na ikekwe ọ ga-ejedebe na 15-inch MacBook Pro.
O doro anya ebe Ming - Chi Kuo ma ọ bụ Economic Daily News si nweta ozi a, mana n'ọnọdụ ọ bụla, ha abụọ nwere ọkwa dị elu nke amụma na amụma ha ziri ezi ma bụrụ amụma.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » Noticias » MacBook gafere 15 nde na 2017
Etu esi egwu vidiyo YouTube na usoro 4k site na Mac anyị